Akụkọ - Igwe eji egwu mmiri
Usoro nyocha niile nke igwe eji egwu bụ iji nyocha ma debe ihe ndị ahụ. A na-ekewapụta ihe dị iche iche na ihe ndị dị elu na nke ala. Usoro nyocha kwesịrị ịdị elu, ikike nhazi nke ndị ikwu kwesịrị iru ihe ndị a chọrọ, yana ihe ndị a nwekwara ike ibu. Enwere ihe dị iche iche maka nyocha nke ihe site na ihuenyo vibrating, nke mere na ihe ndị dị obere karịa ntupu enweghị ike ịgafe oghere sieve nke ihuenyo ahụ na-emegharị nwayọ. Naanị obere akụkụ nke ihe ndị dị mma nwere ike ịhapụ site na sieve sieve, ebe a na-agwakọta ihe ndị ọzọ dị obere karịa sieve na ihe ndị buru ibu karịa sieve sieve (ntụgharị ihe dị na ihuenyo).
Maka akụrụngwa nyocha igwe vibration, ebe nyocha dị irè, nhazi ihuenyo, usoro ihu igwe, vibration frequency na njupụta bụkwa isi ihe na-emetụta arụmọrụ nyocha nke ihuenyo vibrating; n'ihi oke nke ihe, iru mmiri (ọdịnaya mmiri), nkesa nke ihe granular na mmiri mmiri, ọ bụkwa isi ihe kpatara ya na-emetụta ọnụọgụ nyocha nke ihuenyo vibrating. Ngwongwo ndi nwere ezigbo ihe omuma, obere mmiri, ihe ntanye oge, onu ogugu na odighi onu ya na nkuku ya di mfe igabiga na ihuenyo.
Iji meziwanye nyocha nyocha nke igwe ejijiji, maka ihe ndị ahụ dị mma na ihe ndị siri ike nyocha, ihu igwe na -emegharị ahụ nwere ike ịhazigharị usoro ntụgharị nke vibrator (tụgharịa ntụgharị ihe eji eme ihe) ịgbatị oge ịkpọtụrụ n'etiti ihuenyo ihuenyo na ihe ahụ, nke na-enye aka na ọnụego nyocha, mana ikike nhazi ga-adị ntakịrị belata; linear vibrating ihuenyo nwere ike n'ụzọ kwesịrị ekwesị belata ala tilt n'akuku nke vibrating ihuenyo elu ma ọ bụ dịkwuo ya Omume ọma jijiji tilt n'akuku a na-eji nwayọọ na-agba ọsọ nke ihe ma melite screening ọnụego; maka ihe ndị dị mfe iji kpuchie ya na nnukwu irighiri, enwere ike ịgbatị ihu ala nke ihuenyo ihuenyo nke ihuenyo vibrating ma ọ bụ enwere ike belata ntụgharị ihu igwe iji mee ka ngwa ngwa na-aga n'ihu, iji meziwanye nhazi ikike. Ọ bụrụ na achọrọ nbipụta nke ihuenyo vibrating linear ka ọ dị elu, na arụmọrụ nyocha na njikwa njikwa ga-ezute, obosara na ogologo nke ihuenyo vibrating nwere ike ịba ụba.